कलियुगका कुरा: कस कसलाई कहाँ राख्ने होला ?
कस कसलाई कहाँ राख्ने होला ?
माओवादी सभासदहर्ले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग खोसेर फुटालेको 'ब्रिफकेस' त संग्रहालयमा राख्ने निर्णय सर्कारले गरेछ। अब त्यो मारमुङ्ग्रीमा भाग लिने सभासद, त्यो तमासा हेरेर बस्ने संविधानसभा अध्यक्ष/सभामुख र भिड्न जाने मन्त्रीहरुलाई पनि कहाँ कहाँ राख्ने हो भनेर जनताले निर्णय गरे त हुन्थ्यो। तर सबै म जस्तै कुरौटे मात्र छौ‌ हामी नेपाली। हामीले के पो गरौंला र अर्कोपटक तिनैलाई फेरि भोट दिम्ला।